महिला मतदाता मात्र हैन, सक्षम शासक पनि बन्न सक्छन्
सुनको भाउ ८ सयले घट्यो, चाँदी १५ रुपैयाँले
मोरङमा वनको कर्मचारी र पत्रकार हौँ भन्दै रकम असुल गर्ने पक्राउ
युनाइटेड फाइनान्स प्राप्ति गर्ने नबिल बैंकको प्रस्ताव पारित
बाँकेका अस्पतालमा ८० प्रतिशत शय्या खाली
पोल्यान्डसँग स्पेनको बराबरी, पेनाल्टीमा चुके मोरेनो
महाकाली नदीले १५ घर डुबानमा
महाकालीमा पानीको बहाव वर्षकै उच्च
कोरोनाका कारण वाग्मतीमा ३,५९९ जनाको मृत्यु
ब्राजिलमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या पाँच लाख नाघ्यो
आज कहाँ–कहाँ बाढीको जोखिम ?
नेपाल महिला संघ महाधिवेशन महिला मतदाता मात्र हैन, सक्षम शासक पनि बन्न सक्छन्
बाह्रखरी - बुधबार, भदौ २९, २०७३
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल महिला संघको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन धुमधामका साथ बुधबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको छ । वि.सं. २००४ सालमा मंगलादेवी सिंहको नेतृत्वमा स्थपना भएको महिला संघ स्थापनाको झण्डै ६० वर्षपछि तेस्रो महिधेवेशन सुरु भएको हो । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले राजधानीस्थित भृकुटीमण्डपमा महाधिवेशनको उद्घाटन गरेका छन् ।
महाधिवेशन उद्घाटनमा बोल्ने अधिकांश महिला नेतृहरुले पार्टीभित्र ५० प्रतिशत स्थान महिलाको लागि सुरक्षित हुनुपर्ने माग गरेका छन् । पार्टी कोषाध्यक्ष तथा शान्तिमन्त्री सिता देवी यादवले पुरुषको सहयोगविना महिला अघि बढ्न नसक्ने जनाउँदै उनले निष्ठाको राजनीति तथा देशको विकास गर्न आगामी दिनमा महिलालाई प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने बताइन् । मन्त्री यादवले अधिकार मागेर नपाउने जनाउँदै अब महिलाले आफ्नो अधिकार खोसेर लिनुपर्ने बताईन् । उनले भनिन्, “राष्ट्रियता जोगाउन र निष्ठाको राजनीति गर्न पनि महिला नेतृत्वमा आउन जरुरी छ । तर पुरूषहरुले बोल्ने मात्र गरेका छन् त्यसैले अब महिलाले आफ्नो अधिकार खोसेर लिनुपर्छ ।”
यसैगरी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइरालाले अधिकार माग्नुअघि महिला पनि सक्षम हुनुपर्ने औंल्याइन् । आफू सक्षम भए मात्र स्वतन्त्र हुन सकिने र स्वतन्त्र भएमात्र अधिकार पाइने उल्लेख गर्दै कोइरालाले सक्षम नभए महिला जहिलेपनि नेताको दास मात्र हुनुपर्ने अवस्था आउने बताईन् । कोइरालाले भनिन्,“महिला सक्षम, सबल नभएमा जहिले पनि नेताको झोले मात्र भइन्छ । नेताको झोलेले कहिल्यै पनि अधिकार पाउँदैन उ जहिले पनि दास मात्र रहिरहन्छ ।”
कांग्रेस पूर्वकोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादवले राजनीतिको मूलप्रवाहमा महिलालाई ल्याउन नसके राष्ट्रको विकास नहुने जिकिर गरिन् । उनले केन्द्र, प्रदेशदेखि स्थानीय स्तरमा महिलाको कम्तिमा ५० प्रतिशत अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिन् । पूर्वमन्त्री समेत रहेकी यादवले भनिन्, “आँउदो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्छ ।”
यसैगरी महिला संघकी तदर्थ समितिकी अध्यक्ष डिला संग्रौलाले पनि आउँदो सबै निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत नभई ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्थ गर्न माग गरिन् । महिलाले पूरुषले गर्ने हरेक काम गर्न सक्ने जनाउँदै संग्रौलाले नेपाली कांग्रेसले आउँदो दिनमा महिलालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पर्ने बताइन् ।
यस्तै महिला संघकै पूर्वअध्यक्ष तथा पुनः अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेकी मीना पाण्डेले महिलालाई ३३ प्रतिशत नभई ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्न माग गरिन् । उनले दाहिने र बायाँ दुवै गोडा नचलेमा दुर्घटना हुने बताउँदै दुर्घटनाबाट जोगिन पनि महिला र पूरुषले समान हक पाउनुपर्नेमा जोड दिईन् । महिलाले देश चलाउन सक्ने बताउँदै पाण्डेले भनिन्, “अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा पार्टीले एक जनामात्र महिला मन्त्री पठाएको छ । यसबाट पनि थाहा हुन्छ पार्टीले महिला माथि न्याय गरेको छैन । म पार्टी नेतृत्वलाई भन्न चाहन्छु, महिला मतदाता मात्र हैन, शासन चलाउने सक्षम शासक पनि बन्न सक्छन् ।”
बुधबार सुरु भएको महिला संघको महाधिवेशन तीन दिनपछि सकिदैंछ ।
बुधबार, भदौ २९, २०७३ मा प्रकाशित
देउवालाई सुझाव– सिटौलालाई कार्यवाहक दिनुस्, नभए जित्नुहुन्न
काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नेता कृष्ण सिटौलालाई कार्यवाहक सभापति दिएर अघि बढ्न उनी निकट नेताहरुले सुझाव दिएका छन्... १ घण्टा पहिले
क्रियाशील सदस्यता वितरणको विवादले कांग्रेसको तल्लो तहसम्म असन्तुष्टि
विराटनगर । मनपरी ढंगले क्रियाशील सदस्या वितरण गरेको भन्दै केही युवाले नेपाली कांग्रेसको मोरङ ४ नम्बर क्षेत्रीय समितिको कार्यालयमा तालाबन्दी... २ घण्टा पहिले
सरकार राष्ट्रघाती भयो, हाम्रा पुस्ताले ऊँटको दुध पिउने अवस्था आउँदैछ
साधारणतया कुनै पनि पूर्वराष्ट्रपतिले देशको कार्यकारीको काममा टिप्पणी गर्नु शोभनीय मानिँदैन । देशको इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण मोडमा प्रथम राष्ट्रपतिको रुपमा... २ घण्टा पहिले
गठबन्धन सरकारमा असहमति, कांग्रेसले तोड्यो जसपासँगको लिखित सहमति
पोखरा । अघिल्लो शनिबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले शुक्रबार मात्रै विश्वासको मत लिए । पोखरेलले आफूसहित... ६ घण्टा पहिले
दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कांग्रेसमा एकमत
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विपक्षी गठबन्धनलाई बलियो बनाएर अघि बढ्ने तयारी गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय समिति... ८ घण्टा पहिले
यादव पक्षको गम्भीर आरोप– महन्थले किर्ते गरे, नक्कली बैठक पुस्तिका तयार गरियो
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को एउटा पक्षले अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले गैरकानुनी र दण्डनीय कार्य गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ... १४ घण्टा पहिले
निरङ्कुश शासन चलाउने रहर
एकै दिन १९ अर्बको सेयर कारोबारले बढाएको जोखिम
विपद् प्रतिकार्यमा वित्तीय संस्था
असफल नेतृत्वलाई महाधिवेशन नै भारी
के.सी.एल. अस्ट्यूट क्यापिटलकाे सेयर गरिमा विकास बैंकले खरिद गर्ने, नाम गरिमा क्यापिटल हुने
‘बाढी पहिरो क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील भएर काम गरिरहेका छौँ’ शुक्रबार, असार ४, २०७८
पाँचखाललाई ‘सुनको कचौरा’ को रुपमा विकास गर्दैछौँ बिहीबार, असार ३, २०७८
भारतले कहिल्यै नेपालमा प्रजातन्त्र आओस् भनेको छैन बुधबार, असार २, २०७८
४ घण्टा पहिले
उत्तर कोरियामा एक प्याकेट कफीको १०० डलर, समस्यामा किम ४ घण्टा पहिले
रुसमा जहाज दुर्घटनामा नौजनाको मृत्यु १६ घण्टा पहिले
माइक्रोसफ्टको अध्यक्षमा भारतीय मूलका सत्या नाडेला नियुक्त २२ घण्टा पहिले
अब यस्तो हुनेछ निषेधाज्ञा : सवारीमा जोर–बिजोर, व्यापार–व्यवसाय समय तोकेर सञ्चालन गर्न दिइने
‘जग्गा बाँड्दै हिँड्थेँ, बाढीले आफैँ सुकुम्बासी बनेँ’ (भिडियोसहित)
काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा एकसातादेखि १५ दिनसम्म थप्ने तयारी